Farmaajo waa khaa'inul waddan – Wasiir hore | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo waa khaa’inul waddan – Wasiir hore
Sida diiwaanka ku dhigan, Maryam Qaasim, ayaa ahayd halka Wasiir ee maalintii lagu darayay liiska argagixisada ONLF, si cad kulankii Golaha Wasiirrada ee Kheyre shir guddoominayay ka sheegtay in go’aankaas uu yahay khalad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, Marwo, Maryam Qaasim Axmed, oo xilli ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhawaa Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa sheegtay inuu yahay khaa'inul waddan, beenlow ah, oo siray dadka Soomaaliyeed, si uu kursi u helo.
Iyadoo ka jawaabeysay qoraal uu qoray wadaad loo yaqaan Sheekh Cabdi Xirsi, oo ku eedeysan dacwado anshax xumo galmo ah, kana mid ah taageerayasha Farmaajo, ayay sheegtay in Farmaajo khiyaamay iyada iyo dadka Soomaaliyed-ba, markii ay ogaatay Khiyaanadiisa ay ka tagtay shaqada Maamulkiisa.
“Waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo inaan Farmaajo ku sirmay sidii dad badan oo Somali ah. Waa khaa'in muwaadin soomaaliyeed u gacan geliyay cadawga tigreega. Markaan arkay xaqiiqdiisa waan ka tagay dawladii uu Madaxweynaha ka ahaa, ii dhiga magaceyga”, ayay tiri Maryan Qaasim.
Sida diiwaanka ku dhigan, Maryam Qaasim, ayaa ahayd halka Wasiir ee maalintii lagu darayay liiska argagixisada ONLF, si cad kulankii Golaha Wasiirrada ee Kheyre shir guddoominayay ka sheegtay in go’aankaas uu yahay khalad, loona baahan yahay in laga fiirsado, lagana garaabo dhiibistii Qalbi-dhagax.
Sugnaanshahaas iyo mowqifkaas taariikhiga ah, Maryan Qaasim, waxa ay ku weysay xilkii ay heysay, kadib markii ay Farmaajo iyo Kheyre go’aansadeen in Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, si dadban loo hoos geeyo xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, maadaama Maryan diidday taageeridda qaraarka.
Maalmo kadib waxaa dhacay qarixii 14-kii October 2017, kaas oo halkii ay gurmadka dadka masuul uga noqon lahayd Xukumadda, Wasaaradda Gargaarka uu Kheyre magacaabay guddi gargaar oo isaga hoos taga, Guddigaas wuxuu si laga xishoodo u musuqay deeqo gudaha iyo dibadba ka yimid oo dhibanayaasha logu tala galay.
Tallaabooyinkaas is biirsaday waxa ay sababeen in Maryan Qaasim, isaga tagto xilka ay heysay, isla-sanadkii koobaad ee maamulkii Farmaajo, waxayna dhowr jeer oo hore, sheegtay in la joogo xilligii ay shaqsiyaadkii xilligaa dalka hoggaaminayay ay dadka hor imaan lahaayeen, isla-markaana umadda cafis weydiisan lahaayeen.
Waxaa xusid mudan, in dhawaan Maamo Maryan Qaasim, ay magaalada Baeraawe ee gobolka Shabeellaha hoose, u tagtay, in ay u baratanto kursiga HOP#194 ee Golaha shacabka, hayeeshee, Farmaajo iyo Laftagareen, ayaa isku hor-gudbay, waxaana kursigaas loo xiray, Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha ee Xamsa Siciid Xamsa.